Dawladaha Masar iyo Itoobiya oo ku muransan biyaha Niil barnaamij kusaabsan dhegayso. – Radio Daljir
Diseembar 5, 2012 12:04 g 0
Radio Daljir, Dec 5, Khubro Caalami ah oo ku xeeldher arimaha saadaasha hawada ayaa sheegay in caalamka ay kusoo fooleedahay biyo la’aan baahsan, ayaa dhinaca kale waxaa sii xoogaysanaya muranka ka taagan biyaha Webiga Niil oo mara 9 Dawladood oo kuyaala Qaaradani Afririka.
Dawladaha Masar, iyo Suudaan ayaa iyagu u diyaarsan dagaal ka dhan ah Dawlada Itoobiya hadii ay Dawlada Itoobi samayso biyo xireen weyn oo ay uga faa’idaysanayso biyaha Webiga Niil.
Hadaba Radio Daljir ayaa barnaamij gaar ah ka diyaariyey arimahaasi Wariye Maxamed Yuusuf Dorge oo kusugan xarunta Daljir ee Garoowe ayaa barnaamijkaasi inoo diyaariyey, Hoose ka dhegayso.
Caawa iyo Daljir, Arbaca, Dec 5-2012, Maxamuud Cabdi Ibraahim ‘Daljir Boosaaso’